Stearns County > Law & Public Safety > Emergency Services > Coronavirus > COVID-19: Soomaali
Home » Law & Public Safety » Emergency Services » Coronavirus » COVID-19: Soomaali
Soomaali COVID-19 macluumaadka
U wac khadka tooska ah ee Stearns County Hotline ee loogu talagalay dadka ay saameysay COVID-19:
Wac ka hor intaadan booqan dhakhtarka
Koronafayraska Cusub ee 2019 (COVID-19) waa cudur neef-mareen oo ku dhaca dadka oo uu sababo fayras cusub. Wuxuuna ku faafi karaa qof ka qof.
Maadaama u kani yahay fayras cusub, wali waxa jira waxyaabo aynaan aqoon, laakiin maalin kasta waxaa soo ifbaxa waxyaabo cusub oo ku saabsan cudurka COVID-19.
Bahda Faydhoorka ee Minnesota waxay ku dadaalayaan sidii uu hoos ugu dhici lahaa faafitaanka cudurka Covid-19 ee gobolkeena. Waxaan ku xisaabtamaynaa qof kast oo naga mid ah in uu qayb ka noqdo dadaalkaas.
Iska ilaali qaadashada fikradda ku saabsan qofka aad u maleyneyso inuu jirran yahay, sababtoo ah fayraskan ma xulanayo cidda uu ku dhacayo.
Dadka la xaqiijiyay inay qabaan cudurka COVID-19 ayaa leh jirro neefsasho dhexdhexaad illaa mid daran ah oo leh calamaado ay ka mid yihiin:
▪ Neefsashada oo gaabis ah
Dadka yarha dareemaya cudurka COVID-19 waxay joogi karaan guryahaooda inta uu xanuunku hayo. In aad daryeel caafimaad u baxayso mooyeeni gurigaada ku ekoow. Waxaad la xirrirtaa dhakhtarkaaga haddii aad u baahantahay daryeel caafimaad.
Ogow wax intaa dheer
a hel macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan cudurka COVID-19 barahan internetka:
Waaxda Caafimaadka Minnesota Koronafayraska Cusub ee 2019 (COVID-19) (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html).
Xarumaha Xakameynta iyo Ka Hortagga Cudurka ee Koronafayraska Cusub ee 2019 (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html).
Ilaha laga Helo Daryeel Caafimaad Qiime-Jaban leh ama laga Helo Caymis Caafimaad (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/hcressomali.pdf)
Ka Hortag u samee naftaada iyo bulshadaadaba
Siyaabaha ugu wanaagsan ee aad iskaga ilaalin karto cudurka COVID-19 waa inaad samayso isla waxyaabaha aad samayso inaad iskaga ilaaliso durayga iyo hargabka:
Gacmahaaga marwalaba ku dhaq saabuun iyo biyo.
Guriga joog markaad xanuunsantahay.
Dabool afkaaga iyo sankaaga markaad qufacaso.
Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha iyo dusha ah ee aad taabato had iyo jeer.
U fiirso cidda aad ka helayso akhbaarta cudurka Covid-19. Balanqaad ku saabsabsan helista daawo ama damaanad qaad lagu daawayn karo ama lagaga hor tagayo cudurka Covid-19 sax ma ahan, lamana hayo xiligan xaadirka ah. Illaa iyo hadda ma jiro talaal ku aadan Covid-19. Fadlan la soco ciwaanka ama websaydka MDH iyo CDC wixii faahfaahin ah oo ku saabsan sida looga hortagi karo cudurka Covid-19.
Boodhadhka La Soo Dejisan Karo
La Noolaanshaha COVID-19
Ka hortag faafidda COVID-19 inta aad wax adeeganeysid
Sida Loo Dhaqdo Gacmahaaga
Ku nadiifinta gacmaha nadiifiyaha gacmaha
Kala Fogaanshaha Bulshada